KARAN JOHAR HEIGHT, အသက်, အရွယ်, ရည်းစား, အတ္ထုပ္ပတ္တိ, ကလေးများ, မိသားစု & ထို့ထက်ပို။ - ဘောလီးဝုဒ်
Karan Johar Height, အသက်, အရွယ်, ရည်းစား, အတ္ထုပ္ပတ္တိ, ကလေးများ, မိသားစု & ထို့ထက်ပို။
နာမည်အပြည့်အစုံ Karan တရားဓမ္မ Kama Johar
အမည် (များ) Rahul Kumar Johar, Karan Kumar Johar
အလုပ်အကိုင် ဒါရိုက်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ စာရေးသူ၊ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်
မွေးနေ့ 25 မေလ 1972
အသက် (၂၀၂၀ တွင်ကဲ့သို့) ၄၈ နှစ်
ကျောင်း Greenlaws အထက်တန်းကျောင်း၊ မွန်ဘိုင်း
ကောလိပ် / တက္ကသိုလ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စီးပွားရေး၏ H.R. ကောလိပ်, မွန်ဘိုင်း
အချစ် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ): Kuch Kuch Hota Hai (1998)
ရုပ်ရှင် (သရုပ်ဆောင်): Dilwale Dulhania Le Jayenge (၁၉၉၅)
ရုပ်ရှင် (ထုတ်လုပ်သူ): Kal Ho Naa Ho (၂၀၀၃)
တီဗွီ (သရုပ်ဆောင်) Indradhanush (1989)
လိပ်စာ ဒုတိယထပ်၊ အထက်လွှတ်တော်၊ ၁၇-၁၈ Shah စက်မှုဇုန်၊ အမှတ် ၂၁၀ ၂၀၂၊ Veera Desai လမ်း၊ အနောက်ဘက် Andheri၊ မွန်ဘိုင်း - ၄၀၀၀၅၃ (Dharma Productions Office)
Carter လမ်း၊ ဘန်ဒရာ၊ မွန်ဘိုင်း (အိမ်)
ဆု, ဂုဏ်ထူး အမျိုးသားရုပ်ရှင်ဆု
၁၉၉၉ Kuch Kuch Hota Hai အတွက်အကောင်းဆုံးလူကြိုက်အများဆုံးရုပ်ရှင်
၁၉၉၉ Kuch Kuch Hota Hai အတွက်အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု၊ Kuch Kuch Hota Hai အတွက်အကောင်းဆုံးဇာတ်ညွှန်းဆု
၂၀၀၂ ခုနှစ် အကောင်းဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဆု - Kabhi Khushi Kabhie Gham
၂၀၁၁ ခုနှစ် အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု - My Name Is Khan
၂၀၀၁: Mohabbatein အတွက်အကောင်းဆုံးဝတ်စုံဒီဇိုင်နာ
၂၀၀၂ ခုနှစ် Kabhi Khushi Kabhie Gham အတွက်အကောင်းဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
2004: Kal Ho Na Ho အတွက်အကောင်းဆုံးပုံပြင်
၂၀၁၁ ခုနှစ် ငါ့နာမအတွက်အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာကခန်
အငြင်းပွားမှုများ •သူနဲ့ twitter စစ်တိုက်ခဲ့တယ် Ram Gopal Varma RGV က 'တစ်စုံတစ် ဦး သည် Karan Johar ၏' the the the Year of the Year 'မှနှုတ်ယူပြီးဆရာ၏နှစ်အတွက်ဆရာဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ယခုနှစ်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟူသောတွစ်တာတွင်စတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် Karan က 'ယခုနှစ်သဘာဝဘေးသည်သင်၏နယ်မြေ Ramu ဖြစ်သည်။ ထိုတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်သက်တောင့်သက်သာနေရာကိုမည်သူမျှအစားထိုး။ မရနိုင်ပါ' ဟုပြန်ပြောခဲ့သည်။
• ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကာရန်နှင့်သရုပ်ဆောင်များကိုဆန့်ကျင်ရန် FIR တစ်ခုချိန်းခဲ့သည် Ranveer Singh က နှင့် Arjun Kapoor က အငြင်းပွားဖွယ် 'AIB Roast' တွင်သူတို့ပါဝင်ခဲ့ခြင်းအတွက်
• Karan Johar ၏ Ae Dil Hai Mushkil နှင့်နောက်တွဲယာဉ်နောက်တွဲယာဉ်နောက်လိုက်နှင့် Ajay Devgan Shivaay ၏ လည်ပင်း Ae Dil Hai Mushkil ၏မျက်နှာသာအတွက်ဘက်လိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပေး၏။ ယင်းနောက် Ajay Devgan က Karan Johar သည်နောက်တွဲယာဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက် KRK ကိုပေးသည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလတွင် Uri တိုက်ခိုက်မှုအပြီး MNS နှင့် Shiv Sena ကဲ့သို့သောနိုင်ငံရေးပါတီများသည်ပါကစ္စတန်သရုပ်ဆောင်များကိုအိန္ဒိယမှထွက်ခွာရန်အခွင့်အာဏာပေးခဲ့ပြီးဘောလီးဝုဒ်မှရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများအားသူတို့၏ဇာတ်ကွက်များတွင်ပါ ၀ င်ခွင့်မပြုပါရန်ပြောကြားခဲ့သည်။ သော်လည်း, ကဲ့သို့သောပါကစ္စတန်သရုပ်ဆောင်များကို ဖဝါဒ်ခန် နှင့် Mahira Khan အိန္ဒိယမှထွက်ခွာသော်လည်း Karan သည်သူတို့ကို Twitter ပေါ်တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် MNS သည်သူသည်ပါကစ္စတန်သရုပ်ဆောင်များနှင့်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်မည်ဆိုလျှင်သူ့ကိုရိုက်နှက်လိမ့်မည်ဟုပြောဆိုခြင်းဖြင့် Karan အားခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
•အောက်ပါ Sushant Singh က rajput ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇွန် ၁၄ ရက်တွင်ဘောလင်ဝုဒ်ရှိအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကိုမြှင့်တင်သည့်အတွက်လူအများက Karn Johar အားမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့သည် သူ၏နာမကိုလည်း F.I.R. ၌ထငျရှား အပါအဝင်အချို့သောဘောလီးဝုဒ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆန့်ကျင် Bihar အတွက်တင်သွင်းခဲ့သည် Sanjay Leela Bhansali , Salman Khan က နှင့် Ekta Kapoor ။  PINKVILLA
• ၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာလတွင်၊ Karan Johar ၏အမည်မှာ Sushant Singh Rajput သေဆုံးပြီးနောက်စတင်ခဲ့သောဘောလီးဝုဒ်မူးယစ်ဆေးဝါးအတန်းတွင်ဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးဗျူရို (NCB) ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရဘောလီးဝုဒ်နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များစွာအား Dharmatic Entertainment (Dharma Productions ၏ဒီဂျစ်တယ်လက်ကိုင်) မှ ၀ န်ထမ်းဟောင်း Kshitij Prasad ကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ Kshitij Prasad အားဖမ်းဆီးပြီးမကြာမီ Karan Johar ကကျင်းပသည့် 2019 ၏ဗီဒီယိုကိုလွှင့်ထုတ်ခဲ့သည်။ Arjun Kapoor က , Malaika Arora , ဗစ်ကီ kaushal , Shahid Kapoor က , Ranbir Kapoor က နှင့် Deepika Padukone နှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများ Zoya Akhtar နှင့် Ayan Mukerji တို့ကိုမူးယစ်ဆေးစွဲသည်ဟုဆိုကြသည်။ [နှစ်ခု] သတင်း ၁၈ သို့သော် Karan Johar ကသူ၏တွစ်တာကိုင်တွယ်မှုမှတစ်ဆင့်သူ့အားလက်ခံကျင်းပသည့်ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးပါတီအားငြင်းဆိုခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Orientation လိင်တူချစ်သူ
ကလေးများ သူတို့က - Yash (အစားထိုး)
သမီး - Roohi (အစားထိုး)
မိဘများ ဖခင် - နှောင်းပိုင်း Yash Johar (ထုတ်လုပ်သူ)
အမေ - Hiroo Johar
ဝမ်းကွဲညီအစ်ကိုများ - Aditya chopra , Uday chopra
အစားအစာ Parsi အစားအစာ
မင်းသား Shah Rukh Khan , Hrithik Roshan , Rishi Kapoor
မင်းသမီး Meryl Streep, Kajol , Rani Mukerji နှင့် Kareena Kapoor
ရုပ်ရှင် Dilwale Dulhania Le Jayenge
သောက်စရာများ Saint Emilion (ဝိုင်)၊ Dom Perignon (ပန်းရောင်ရှမ်ပိန်)
စားသောက်ဆိုင် မွန်ဘိုင်းရှိ Starbucks ကော်ဖီ
သီချင်း Dafli Wale Dafli Baja  Tellychakkar
ကားများစုဆောင်းခြင်း Jaguar XF
လစာ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ရူပီး 6-8 ကုreေ / တီဗီရှိုးရာသီ
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ရူပီး ၈၃၅ Crore (ဒေါ်လာ ၁၇၂ သန်း)
Karan Johar အကြောင်းလူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Karan Johar ဆေးလိပ်သောက်လား။ မသိဘူး
Karan Johar သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား
အသက် ၄ နှစ်တွင်ဆံပင်ညှပ်သူတစ် ဦး၊ ၁၀ နှစ်အရွယ်ဆရာဝန်၊ ၁၅ နှစ်အရွယ်စာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ချင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အသက် ၂၀ တွင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူဖြစ်လာသည်။
1989 ခုနှစ်တွင်သူသည်ပထမ ဦး ဆုံး Shrikant အဖြစ် Doordarshan တီဗီရဲ့ Serial Indradhanush တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။
Karan သည် Dilwale Dulhania Le Jayenge (၁၉၉၅) တွင် Rocky ဇာတ်ကားတွင်သူ၏ပထမဆုံးဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Karan တစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့သည် အက္ခရာ 'K' နှင့်ပတ်သက်။ အယူသည်း ဤစာသည်သူ၏ရုပ်ရှင်အတွက်အောင်မြင်မှုနှင့်ကျော်ကြားမှုကိုဖြစ်စေသည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည် ဒါကြောင့်သူက Kuch Kuch Hota Hai၊ Kabhi Khushi Kabhi Gham ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။ သို့သော် Lage Raho Munna Bhai ကိုကြည့်ပြီးနောက်သူသည်ဤယုံကြည်ချက်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးသူ၏ရုပ်ရှင်၏အမည်များတွင်အတိုကောက်အဖြစ်အခြားအက္ခရာများကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
သူကအရမ်းသူ့အမေကိုတွဲထားပြီးမကြာခဏ '' Mumma ရဲ့ Boy '' အဖြစ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။
Karan လည်းတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် ဝတ်စုံဒီဇိုင်နာ သူ၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေ Shah Rukh Khan အတွက် DDLJ၊ Dil Toh Pagal Hai၊ Mohabbatein, Duplicate, Main Hoon Na, Veer-Zaara, Om Shanti Om နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။
ဦး တည်ရာသို့မဝင်ရောက်မီနာမည်ကြီးဒါရိုက်တာနှောင်းပိုင်းကိုကူညီခဲ့သည် Yash Chopra ။ ထို့အပြင်သူ၏မိခင်သည် Late Yash Chopra ၏အငယ်ဆုံးသောညီမဖြစ်သည်။
သူ၏အဓိကပန်းတိုင်မှာအော်စကာဆုပ်ကိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါကသူသည်အော်စကာနှင့်အတူအနီရောင်ကော်ဇောဖြင့်လမ်းလျှောက်လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးသူကထိုဆုကိုကိုင်ဆောင်။ “ ဒါကမင်းအတွက်အိန္ဒိယပဲ” ဟုပြောလိမ့်မည်။
Karan တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ခရစ်ကက်မထင်မှတ် ပြီးတော့သူကအချိန်နည်းနည်းရတိုင်းကစားရတာကြိုက်တယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်သူသည်ပိုလန်နိုင်ငံ၊ ဝါဆောတွင်ကျင်းပသော Miss World ပြိုင်ပွဲတွင်ဂျူရီအဖွဲ့ ၀ င်အဖြစ်ပထမဆုံးအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ဂျီနီဗာအခြေစိုက်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်က ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်လူငယ်လူငယ်ခေါင်းဆောင် ၂၅၀ တွင်တစ် ဦး အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
အိန္ဒိယ ၀ န်ကြီးချုပ်ဟောင်းအပြင် မန်မိုဟန်ဆင်း သူသည်လန်ဒန်အိုလံပစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသည့်တစ် ဦး တည်းသောအိန္ဒိယဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်သူသည် Bombay Velvet ရုပ်ရှင်တွင် Kaizad Khambatta ၏အပျက်သဘောဆောင်သောအခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့ပြီး₹ ၁၁ ကိုသာသူ၏အခကြေးငွေအဖြစ်ယူခဲ့သည်။
သူသည် Ae Dil Hai Mushkil ၏ဇာတ်ညွှန်းအတွက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုလုံးကိုရက် ၃၀ အတွင်းရေးသားခဲ့သည်။
Karan ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း Shah Rukh Khan ဖြစ်သော်လည်းသူနှင့်အတူအလွန်သဘောကျသည် Hrithik Roshan တစ်ချိန်ကငါတို့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာကြိုးစားအားထုတ်ကြတယ်လို့တစ်ချိန်ကပြောခဲ့ပေမဲ့ငါတို့အားလုံးက ၁၀၀% ပေးပေမယ့် Hrithik ကသူ့ ၃၀၀% ကိုပေးခဲ့တယ်။
ရုပ်ရှင်မရိုက်မီသူသည်ကျော်ကြားသော Lash Yash Chopra ကိုကူညီခဲ့သည်။
သူကအပေါ်တစ် ဦး အရူးအမူးဖြစ်ခဲ့သည် Khanna Twinkle (ယခု, ၏ဇနီး Akshay Kumar ) ။
NDTV နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင်သူသည်သူ၏ဘဝတစ်ချိန်ချိန်တွင်သူခံစားခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်စိတ်တိုက်ခိုက်မှု။
၂၀၁၇ ခုနှစ်မတ်လတွင်သူသည်အငှားမွေးစားခြင်းဖြင့်သားဖြစ်သူ Yash Johar နှင့်သမီး Roohi တို့အားအမွှာပူးမွေးရန်ကြင်ဖော်မဲ့မိဘဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူက TED ဟောပြောချက်ကိုသူ့ကလေးတွေကိုစာတစ်စောင်ပေးခဲ့တယ်။
သူ့အမေအရသူသည်အလွန်စိတ်ထိခိုက်လွယ်သောစိတ်ခံစားမှုရှိသူဖြစ်သည်။ သူကလေးဘဝကတည်းကသယ်ဆောင်ခဲ့သည့် attribute တွေ။
↑နှစ် သတင်း ၁၈
yukti kapoor နှင့် rohan mehra
milkha Singh အစ်မ ishri kaur
taare zameen တန်းတူကောင်လေးနာမည်
အမြင့်ဆုံးပေးဆောင် Bollywood မင်းသမီး 2017
sonu sood မွေးနေ့
parkash singh badal ၏မွေးနေ့